बङ्गलादेशविरुद्वको खेलमा हार टार्न सके नेपाल फाइनलमा पुग्ने
रासस , २२ मंसिर २०७६, आईतवार, १२:३९ pm
काठमाडौं । बङ्गलादेशविरुद्वको खेलमा हार टार्न सके नेपाली पुरुष फुटबल टोली १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)को स्वर्ण दाबेदारका रुपमा फाइनलमा पुग्नेछ । यसअघि भएको खेलमा श्रीलङ्कासँग एक–एक गोलको बराबरीमा रोकिएपछि नेपालले फाइनल पुग्न बङ्गलादेशविरुद्ध जीत या बराबरीमा रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही कारण पनि आज साग फुटबलको फाइनल प्रवेशका लागि नेपाललाई बङ्गलादेशसँग जीत या बराबरी आवश्यक छ । दशरथ रङ्गशालामा भरिभराउ दर्शकको साथ पाएको नेपाली टोलीले शनिबार माल्दिभ्सविरुद्ध २–१ को जीत हात पार्यो। जारी खेलमा नेपालसँग मात्रै पराजित भूटान चार खेलबाट शीर्ष ९ अङ्क जोड्दै फाइनल पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ ।
साग क्रिकेटमा नेपालको पहिलो प्रतिद्वन्द्वी श्रीलङ्का
जोर्डनमा जारी एएफसी यु–१६ च्याम्पियनसिप छनोटमा आज नेपाल र ताजिकिस्तान भिड्ने
सागमा आज १५ खेल हुँदै, कुन खेल कहाँ ?
नेपाल र सिङ्गापुर टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजमा भिड्ने
जोर्डनमा जारी एएफसी यु–१६ च्याम्पियनसिपमा नेपालले श्रीलङ्कासँग खेल्ने
१३औँ सागः महिला भलिबलमा बङ्गलादेशमाथि नेपालको जीत
सञ्चार मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै खतिवडाले भने- ‘सरकारको गुणगानमात्रै गाउनु पर्छ भन्ने होइन’
उद्योग बाणिज्य महासंघको साधारण सभा चैत २८-२९ गते हुने, त्यसपछि शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष
प्रधानमन्त्री ओलीले भने-‘मलाई पनि च्याब्रुङसँगै नाचौँ नाचौँ लाग्यो’
टर्की र ग्रिस पठाइदिन्छु भनी ३९ लाख ५६ हजार ठगी गर्ने पक्राउ
यति ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु बाहिर आएका छन्, देउवा किन एमसीसी एमसीसी मात्रै भन्छन् ?
एनआरएन लघुवित्तको एजीएमबाट किसान र दिव्य लघुवित्त गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरिने
मिर्मिरे लघुवित्तको सीईओमा राजेन्द्र न्यौपाने नियुक्त, बोहराले दिएको राजीनामा स्वीकृत